Izinga likashukela le-Optimum kushukela kanye nokuphambuka kwalo > Isifo sikashukela
Ukuxilongwa - Uhlobo 2 Sikashukela
Izindlela zokuqinisekisa lesi sifo yilezi amanani alandelayo ku-mmol / l:
esiswini esingenalutho - kusuka emahoreni ayi-7 kuye kwayi-8 kusuka ekudleni kokugcina,
Imizuzu engu-120 ngemuva kokudla noma lapho uthatha isisombululo se-glucose equkethe ama-75 g wezinto ezinamanzi (ukuhlolwa kokubekezelela ushukela) - kusuka ku-11.1. Imiphumela ithathwa njengezinkomba ezethembekile zesifo sikashukela kunoma yisiphi isilinganiso sokungahleliwe.
Kulokhu, isilinganiso esisodwa soshukela asanele. Kunconywa ukuyiphinda okungenani kabili ngezinsuku ezahlukene. Isimo kuphela uma ngosuku olulodwa isiguli sidlule izivivinyo ze-glucose ne-glycated hemoglobin, futhi weqa ngo-6.5%.
Uma ukuhlolwa kwenziwa nge-glucometer, khona-ke izinkomba ezinjalo zisebenza kuphela kumadivayisi akhiqizwe kusukela ngo-2011. Ngokuxilongwa kokuqala imfuno yokuqala ukuhlaziya elabhorethri eqinisekisiwe.
INormoglycemia ithathwa njengokuhlushwa kashukela ngaphansi amayunithi ayi-6, kepha ukuhlangana kososayensi besifo sikashukela kuphakamisa ukwehlisa ku-5.5 mmol / l ukuze kuqale izindlela ezifika ngesikhathi zokuvikela lesi sifo.
Uma amanani emingcele etholakele - kusuka ku-5.5 mmol / l kuya ku-7, khona-ke lokhu kungaba wuphawu lwe-prediabetes. Uma isiguli singabambeleli emithethweni yokondleka, siphila impilo yokungasebenzi, singenzi imizamo yokunciphisa isisindo, senze umfutho wegazi ube ngokwejwayelekile, khona-ke amathuba okuthola lesi sifo aphezulu.
Uma amanani ajwayelekile atholakala egazini, kepha isiguli sinezici zobungozi zesifo sikashukela, khona-ke ukhonjiswa ukuhlolwa okwengeziwe. Imikhakha yeziguli ezinje ifaka phakathi:
unezihlobo zegazi ezinesifo sikashukela - abazali, odade, abafowethu,
Abesifazane ababelethe ingane enesisindo esingu-4 kg noma ngaphezulu, banesifo sikashukela sokukhulelwa ngesikhathi sokukhulelwa, futhi bahlushwa i-polycystic ovary,
ngomfutho wegazi ngaphezu kwe-140/90 mm RT. Ubuciko. noma belashwa nge-hypertension,
nge-cholesterol ephakeme, ama-triglycerides, ukwephulwa kwesilinganiso sama-lipoprotein aphansi futhi aphezulu ngokusho kwephrofayili ye-lipid,
Inkomba yomzimba wayo ephakeme kuno-25 kg / m 2,
kukhona izifo zohlelo lokuthinta kwenhliziyo,
ngokuzivocavoca okungaphansi kwemizuzu engu-150 ngeviki.
Uma okungenani eyodwa yezici zobungozi ikhona, kufanele kwenziwe ukuhlolwa kokubekezelela ushukela. Kuboniswa noma kungabikho ngokuphelele kwezimpawu ezijwayelekile zesifo sikashukela.
Uma imiphumela itholakala ngaphezulu kwe-7.8 mmol / L, kodwa ngaphansi kwe-11.1 mmol / L (ngemuva kokulayisha ushukela), ukutholakala kwe-prediabetes. Inkambo yokugcina yesifo ikhonjiswa ngokwanda kwe-hemoglobin ye-glycated ebangeni ukusuka ku-5.7 kuye ku-6.5%.
Ukuhlolwa kokubekezelela kwe-glucose kukhombisa ukuqagela kohlobo lwesibili sikashukela. Kokuhlukahluka okuncike kwe-insulin, ukuzimisela kwe-insulin, i-C-peptide, kufakiwe ezinhlelweni zokuxilonga.
Inketho yokuxhomekeka kwe-insulin iqala kaningi ngokuncipha kwemali. Lokhu kungenxa yokuthi isikhathi eside i-pancreas iyakwazi ukubhekana nokwakheka kwe-insulin. Kungemva kokungabi ngaphezu kwama-5-10% wamangqamuzana ahlala esebenza, ukwephulwa okunamandla kwe-carbohydrate metabolism kuqala - ketoacidosis. Kulokhu, i-glycemia ingaba ngu-15 mmol / l nangaphezulu.
Ngohlobo lwesibili sikashukela inenkambo ebushelelezi, ushukela ukhuphuka kancane, izimpawu zingacishwa isikhathi eside. I-Hyperglycemia (ushukela omkhulu) ayitholwa njalo, kunezilinganiso eziphakeme kunalezi ezijwayelekile kuphela ngemuva kokudla.
Ngesikhathi sokukhulelwa i-placenta ikhiqiza ama-hormone aphikisayo. Vimbela ushukela ekuweni ukuze ingane ithole izakhi ezengeziwe zokukhula. Ebusweni bezici zobungozi zingakhula isifo sikashukela sokukhulelwa. Kuhlolwa igazi njalo ngemuva kwezinyanga ezintathu.
Izindlela zokutholwa yilezi: ukukhuphuka kwe-glycemia kusuka ku-5.1 kuye ku-6,9 mmol /, kanye namahora ama-2 ngemuva kokudla (ukuphuza i-glucose) - kusuka kumayunithi angama-8,5 kuya kwayi-11.1. Kwabesifazane abakhulelwe, ushukela futhi unqunywa ihora elilodwa ngemuva kokuvivinya umzimba ngesikhathi sokuhlolwa kokubekezelela ushukela. Kungahle kube nokukhethwa okunjalo - esiswini esingenalutho futhi ngemuva kwemizuzu engu-120 izivivinyo zivamile, futhi emva kwemizuzu engama-60 zingaphezu kuka-10 mmol / l.
Uma kutholakala ukugxila okuphezulu, khona-ke ukuxilongwa kwesifo sikashukela esisanda kutholwa kwenziwa.
Izinga elincane kakhulu, ngisho nakwilabaphilile, alisungwanga ngokuqondile; iphuzu lereferensi liyi-4.1 mmol / l. Ku-mellitus yesifo sikashukela, iziguli zingathola ukubonakaliswa kokwehla koshukela noma ngamanani ajwayelekile. Umzimba uphendula ukwehla kwawo ngokukhishwa kwama-hormone okucindezela. Umehluko onjalo uyingozi ikakhulukazi asebekhulile. Imvamisa, ngabo, imvamisa luhla lofika ku-8 mmol / l.
Isifo sikashukela i-mellitus sibhekwa sinxephezelwe (sivunyelwe) ngaphansi kwalezo zimo:
ushukela ku-mmol / l: esiswini esingenalutho kuze kufike ku-6.5, ngemuva kokudla (ngemuva kwemizuzu engu-120) kuze kufike ku-8.5, ngaphambi kokulala kuze kufike ku-7.5,
iphrofayili ye-lipid ijwayelekile,
umfutho wegazi - kufika ku-130/80 mm RT. Ubuciko.,
isisindo somzimba (inkomba) - 27 kg / m2 kwabesilisa, 26 kg / m2 kwabesifazane.
Isifo Sikashukela esikhokhelwayo
Ngobunzima obulinganiselwe (isinciphiso) seshukela, ushukela usosibangeni ufike ku-13.9 mmol / l ngaphambi kokudla. I-glycemia enjalo ivame ukuhambisana nokwakhiwa kwezidumbu ze-ketone kanye nokuthuthukiswa kwe-ketoacidosis, imithambo nemithambo yezinzwa kuyathinteka. Kungakhathalekile ukuthi hlobo luni lokugula, iziguli zidinga i-insulin.
Inkambo enwetshiwe ibangela zonke izinkinga zesifo sikashukela, ikoma kungenzeka. Izinga likashukela eliphakeme kakhulu nge-hyperosmolar ngu-30-50 mmol / L. Lokhu kubonakala ngokukhinyabezeka okukhulu kwemisebenzi yobuchopho, ukuphuma komzimba futhi kudinga ukwelashwa okuphuthumayo.
Ushukela muni ushukela
Ukuxilonga isifo sikashukela (kungakhathalekile ukuthi hlobo luni), ukuhlolwa kwegazi kokuhlushwa kweglucose kuyadingeka.
esiswini esingenalutho - kusuka kwezingu-7 (izingxenye ze-plasma zegazi ezivela emithanjeni) ngemuva kwamahora angu-8 kusukela ekudleni kokugcina,
Imizuzu engu-120 ngemuva kokudla noma lapho uthatha isisombululo se-glucose equkethe ama-75 g wezinto ezinamanzi (ukuhlolwa kokubekezelela ushukela) - kusuka ku-11.1. Imiphumela efanayo ibhekwa njengezinkomba ezithembekile zesifo sikashukela kunoma yikuphi ukulinganisa okungahleliwe.
Uma ukuhlolwa kwenziwa nge-glucometer, khona-ke izinkomba ezinjalo zisebenza kuphela kumadivayisi akhiqizwe kusukela ngo-2011, aphinda futhi inkomba yegazi eyi-capillary ukuqhathanisa namavelu we-plousma ye-venous. Noma kunjalo, ekuxilongeni kokuqala, imfuneko yokuhlaziya ilabhorethri eqinisekisiwe. Imishini yasekhaya isetshenziselwa ukulawula inkambo yesifo sikashukela.
Ngabe kukhona ushukela onoshukela ojwayelekile
INormoglycemia ithathwa njengento egxila ushukela ngaphansi amayunithi ayi-6, kepha i-Association of Diabetesologists iphakamisa ukuthi yehlise ku-5.5 mmol / L ukuze iqale izinyathelo ezifika ngesikhathi zokuvikela lesi sifo. Uma amanani emingcele etholakala - ukusuka ku-5.5 mmol / l kuya ku-7, khona-ke lokhu kungaba wuphawu lwe-prediabetes.
Lesi simo umngcele phakathi kokujwayelekile nesifo. Kungagcina kukhula kube yi-mellitus yesifo sikashukela uma isiguli singanamatheli ekudleni okuvinjelwe ushukela, ama-carbohydrate alula kanye namafutha ezilwane, kuhola indlela yokuphila engasebenzi, ayenzi imizamo yokunciphisa isisindo, futhi ilethe umfutho wegazi ube ojwayelekile.
Uma izinkomba ezijwayelekile zitholakala egazini, kepha isiguli sinezici ezisengcupheni yesifo sikashukela, khona-ke sikhonjiswa ukuhlolwa okwengeziwe. Imikhakha yeziguli ezinje ifaka phakathi:
Inkomba yesisindo somzimba wakhe ingaphezulu kuka-25 kg / m2,
Uma okungenani eyodwa yezici zobungozi ikhona, kufanele kwenziwe ukuhlolwa kokubekezelela ushukela. Kuboniswa noma kungabikho ngokuphelele kwezimpawu ezijwayelekile zesifo sikashukela (ukoma, ukuphuma komchamo, ukwanda kokudla, ukuguquka kwesisindo okungazelelwe).
Uma imiphumela itholakala ngaphezulu kwe-7.8 mmol / L, kodwa ngaphansi kwe-11.1 mmol / L (ngemuva kokulayisha ushukela), kutholakala ukuxilongwa kwe-prediabetes. Inkambo yokugcina yesifo ikhonjiswa ngokwanda kwe-hemoglobin ye-glycated ebangeni ukusuka ku-5.7 kuye ku-6.5%.
Ukuhlolwa kokubekezelela kwe-glucose kukhombisa ukuqagela kohlobo lwesibili sikashukela. Uma kwenzeka kuhlukahluka kwesifo esincike ku-insulin, esivame ukuthinta izingane kanye nabantu abasha, incazelo ye-insulin, i-C-peptide, ifakiwe ezinhlelweni zokuxilonga.
Ngabe ushukela uyahluka ngohlobo lwesifo sikashukela
Naphezu kweqiniso lokuthi ngaphansi kwegama elifanayo izinhlobo ezimbili zalesi sifo zihlanganiswa nezimbangela ezahlukahlukene zokuthuthuka, umphumela wokuphela kohlobo 1 nohlobo 2 lwesifo sikashukela yi-hyperglycemia. Kusho ukwanda koshukela wegazi ngenxa yokuntuleka kwe-insulin ohlotsheni lokuqala noma ukuswela kokuphendula kulo kwesibili.
Ukwahluka okuxhomekeka ku-insulin kuqala kakhulu ngokubola. Lokhu kungenxa yokuthi isikhathi eside i-pancreas iyakwazi ukubhekana nokwakheka kwe-insulin. Kungemva kokungabi ngaphezu kwama-5-10% wamangqamuzana ahlala esebenza, ukwephulwa okunamandla kwe-carbohydrate metabolism kuqala - ketoacidosis. Kulokhu, i-glycemia ingaba ngu-15 mmol / l nangaphezulu.
Ngohlobo lwesibili, isifo sikashukela sinenkambo ebushelelezi, ushukela ukhuphuka kancane, izimpawu zingasuswa isikhathi eside. I-Hyperglycemia (ushukela omkhulu) ayitholwa njalo, kunezilinganiso eziphakeme kunalezi ezijwayelekile kuphela ngemuva kokudla. Kodwa-ke, kunoma yikuphi, izindlela zokuthola isifo azihlukile ezinhlotsheni ezahlukahlukene zesifo sikashukela.
Ushukela wegazi wesifo sikashukela sokukhulelwa
Ngesikhathi sokukhulelwa, i-placenta ikhiqiza ama-hormone ama-anti-hormonal. Vimbela ushukela ekuweni ukuze ingane ithole izakhi ezengeziwe zokukhula. Lapho kukhona izinto ezingaba yingozi, i-mellitus yesifo sikashukela sokukhulelwa ingahle ikhule ngalesi simiso. Kuhlolwa igazi njalo ngemuva kwezinyanga ezintathu.
Izindlela zokuxilongwa yilezi: ukukhuphuka kwe-glycemia kusuka ku-5.1 kuye ku-6.9 mmol /, kanye namahora ama-2 ngemuva kokudla (ukuthatha ushukela) - kusuka kumayunithi angama-8,5 kuye kwayi-11.1. Kwabesifazane abakhulelwe, ushukela futhi unqunywa ihora elilodwa ngemuva kokuvivinya umzimba ngesikhathi sokuhlolwa kokubekezelela ushukela.
Kungahle kube nokukhethwa okunjalo - esiswini esingenalutho futhi ngemuva kwemizuzu engu-120 izivivinyo zivamile, futhi emva kwemizuzu engama-60 zingaphezu kuka-10 mmol / l. Kubhekwa nokuthi sinesifo sikashukela sokukhulelwa..
Umkhawulo ophansi wesimo esejwayelekile, ngisho nowabantu abanempilo, awusungwanga kahle. Isiqondisi ngu-4.1 mmol / L. Ku-mellitus yesifo sikashukela, iziguli zingathola ukubonakaliswa kokwehla koshukela noma ngamanani ajwayelekile. Lokhu kungenxa yokuthi umzimba uvumelana nezinga le-glucose ephezulu, futhi uphendule ekunciphiseni kwayo ngokukhishwa kwama-hormone okucindezela.
Umehluko onjalo uyingozi ikakhulukazi kubantu asebekhulile abahlushwa ukuphuma kwegazi okubuthakathaka ukuya ebuchosheni. Kubo, i-endocrinologist inquma inkomba yomuntu ngamunye ye-glycemia, engahle ibe ngaphezulu kunokwejwayelekile. Imvamisa, lokhu kuhla okufika ku-8 mmol / L.
Isifo sikashukela i-mellitus sithathwa sinxephezelwe ngaphansi kwalezi zimo:
Bukela ividiyo kushukela wegazi kushukela:
Ngobunzima obulinganiselwe (isinciphiso) seshukela, ushukela usosibangeni ufike ku-13.9 mmol / L ngaphambi kokudla. I-glycemia enjalo ivame ukuhambisana nokwakhiwa kwezidumbu ze-ketone kanye nokuthuthukiswa kwe-ketoacidosis, imithambo nemithambo yezinzwa kuyathinteka. Kungakhathalekile ukuthi hlobo luni lwesifo, iziguli zidinga i-insulin.
Amanani aphezulu aphawula ukugeleza okubolile. Zonke izinkinga zokuqhubeka kwesifo sikashukela, ukoma kungenzeka. Izinga likashukela eliphakeme kakhulu nge-hyperosmolar ngu-30-50 mmol / L. Lokhu kubonakala ngokukhinyabezeka okukhulu kokusebenza kobuchopho, ukuphuma komzimba futhi kudinga ukunakekelwa okuphuthumayo ukusindisa impilo.
Futhi nakhu okuningi mayelana ne-insulin kwisifo sikashukela sokukhulelwa.
Amazinga kashukela wegazi abonisa izinguquko ku-carbohydrate metabolism. Ukuxilongwa kwesifo sikashukela kudinga ukulinganisa okuphindwe kabili kwe-glycemia esheshayo. Isimo seglucose yegazi senzeka ngenkambo efihlekile yalesi sifo, ngakho-ke, izifundo ezengeziwe zokubekezelela umthwalo weglucose, ukuzimisela kwe-glycated hemoglobin, insulin, ne-C-peptide nakho kuyadingeka. T
Ukuxilongwa okunjalo kukhonjisiwe phambi kwezimpawu zobungozi. Ngesikhathi sokukhulelwa, bonke abesifazane bavivinywa ukuthola uhlobo lwesifo sikashukela.
Izindlela ezinkulu zokunciphisa ushukela wegazi: ukudla, indlela yokuphila. Okuzosiza ukubuyisela i-glucose ibe ejwayelekile ngokushesha. Izindlela zokuzivocavoca nezomzimba ukwehlisa ushukela wegazi. Lapho izidakamizwa kuphela ezizosiza.
I-insulini yesifo sikashukela sokukhulelwa ichazwa lapho ukudla, amakhambi, kanye nezinguquko zokuphila kungasizanga. Yini edingekayo kwabesifazane abakhulelwe? Imiphi imithamo ebekelwa uhlobo lomshukela wesifo sikashukela?
I-pathology efana nesifo sikashukela kwabesifazane ingabonakala ngaphandle kwesizinda sokuxineka, ukuphazamiseka kwehomoni. Izimpawu zokuqala zomile, ukuchama ngokweqile, ukuphuma emzimbeni. Kepha isifo sikashukela, ngisho nangemva kweminyaka engama-50, singafihlwa. Ngakho-ke, kubalulekile ukwazi okujwayelekile egazini, ukuthi ungakugwema kanjani. Bangaki abaphila nesifo sikashukela?
Enye yezidakamizwa ezinhle kakhulu yisifo sikashukela i-mellitus. Amaphilisi asiza ekwelashweni kohlobo lwesibili. Ungawuthatha kanjani umuthi?
Yiziphi izikhalazo ezivame ukuthunyelwa ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2?
Izimpawu ze-Classical (izimpawu) zohlobo 2 sikashukela mellitus:
ukomela okukhulu (isifiso esijwayelekile sokuphuza amanzi ngamanani amakhulu),
i-polyuria (ukwanda kokuchama),
ukukhathala (ubuthakathaka obujwayelekile obujwayelekile),
ukutheleleka njalo (ikakhulukazi kwesikhumba nezitho ze-urogenital).
ubukhulu noma isikhumba esidlekayo emilenzeni noma ezingalweni,
kwehlise i-acuity ebonakalayo (umbono ofiphele noma obonakele).
Izinkinga (kungaba izimpawu zokuqala zesifo sikashukela):
i-candida (fungal) ye-vulvovaginitis ne-balanitis (ukuvuvukala kwezitho zangasese kwabesifazane nabesilisa),
izilonda ezingaphili kahle noma ukutheleleka kwe-staphylococcal esikhunjeni (ukuqubuka kwemisipha, kufaka phakathi i-furunculosis esikhumbeni),
i-polyneuropathy (ukulimala kwemicu yezinzwa, kubonakaliswa yi-paresthesia - ukukhamba okukhakhayo kanye nobunzima emilenzeni,
ukungasebenzi kahle kwe-erectile (kunciphise ukwakhiwa kwe-penile emadodeni),
i-angiopathy (ukuncipha kokuqina kwemithambo yenhliziyo nobuhlungu esifundeni senhliziyo yemikhawulo engezansi, okukhonjiswa ngobuhlungu nomuzwa wezinyawo ezibandayo).
Izimpawu zakudala (izimpawu) zesifo sikashukela ezinikezwa ngenhla azibonwa njalo. ISIKHALAZO esikhulu Isifo sikashukela i-mellitus sivame ukusizakala, ngakho-ke, kudingeka ukuqaphela okuningi kudokotela womndeni.
Sitholakala nini isifo sikashukela sohlobo 2?
Uma kunezikhalazo (bheka isigaba esedlule) ukuze kuqinisekiswe ukutholakala kwale nkinga, kuyadingeka ukubhalisa uma kukhuphuka izinga likashukela wegazi kusuka emunweni ngenhla kuka-11.1 mmol / l kanye (bheka ithebula 5).
Ithebula 5. Ukugxila kwe-glucose kuma-pathologies ahlukahlukene we-carbohydrate metabolism:
Inkomba ku-mmol / l
Izinga le-glucose -
kusuka ku-capillary (kusuka emunweni)
Yiliphi izinga likashukela wegazi elenza sikwazi ukuxilonga?
Ukuxilongwa kwesifo sikashukela i-mellitus kungenziwa uma isiguli nganoma yisiphi isikhathi esingahleliwe sinezinga le-glucose ephakeme kune-11.1 mmol / L. Izimpawu zesifo sikashukela sohlobo 2 noma izimpawu zohlobo 1 sikashukela kufanele nazo zibhekwe. Funda kabanzi esihlokweni esithi "Izimpawu Zesifo Sikashukela Kwabesifazane." Uma kungekho zimpawu ezibonakalayo, khona-ke isilinganiso esisodwa sikashukela asanele ukwenza ukuxilongwa. Ukuqinisekisa, udinga ukuthola amanye amanani aphezulu we-glucose aphezulu ngezinsuku ezihlukile.
Isifo sikashukela singabonakala ngokudla okusheshayo kwama-glucose eglue ngenhla kuka-7.0 mmol / L. Kepha le indlela engenakuthembeka. Ngoba kuma-diabetes amaningi, ushukela wegazi osheshayo awufiki amanani aphezulu kangako. Yize ngemuva kokudla, amazinga abo kashukela akhuphuka kakhulu. Ngenxa yalokhu, izinkinga ezingalapheki zikhula kancane kancane ezinso, iso, imilenze, ezinye izitho nezinhlelo zomzimba.
Izinkomba zamazinga kashukela we-7.8-11.0 mmol / l, kutholakala ukuxilongwa kokubekezelelwa kwe-glucose ephazamisekile noma i-prediabetes. UDkt Bernstein uthi iziguli ezinje zidinga ukuthi kutholakale ukuthi unesifo sikashukela ngaphandle kokubhuka ngokweqile. Futhi uhlobo lokwelashwa kufanele lube lukhulu. Ngaphandle kwalokho, iziguli zinengozi enkulu yokufa ngaphambi kwesikhathi ngenxa yesifo senhliziyo. Yebo, futhi izinkinga ezingamahlalakhona ziqala ukukhula ngisho nangamanani kashukela ngenhla kuka-6.0 mmol / L.
Ngokutholwa kwesifo sikashukela kwabesifazane ngesikhathi sokukhulelwa, amanani asemngceleni we-glucose wegazi aphansi kancane kunakuzo zonke ezinye izigaba zeziguli. Funda izindatshana ezithi "Isifo Sikashukela Esikhulelwe" kanye ne- "Gestational Diabetes" ukuthola eminye imininingwane.
Ukuxilongwa kwesifo sikashukela sohlobo 2
Uhlobo 2 sikashukela lungahlala iminyaka eminingi ngaphandle kokubanga izimpawu zokuqina. Ukuphila kahle kuya ngokuya kukhula kancane, kepha bambalwa abaguli ababona udokotela ngalokhu. Ushukela wegazi ophakanyisiwe uvame ukutholwa ngengozi. Ukuqinisekisa ukutholwa, kufanele udlulise isivivinyo selabhorathin ye-glycated hemoglobin. Akunconyelwe ukwenza ukuhlolwa kwegazi ngoshukela osheshayo. Izizathu zalokhu zichazwe ngenhla.